Sipra Larnaka: Seranam-piaramanidina eropeana ambony
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Sipra Larnaka: Seranam-piaramanidina eropeana ambony
Aogositra 12, 2017
Ny seranam-piaramanidina iraisampirenena Larnaka any Sipra dia mijanona ho fahatelo amin'ireo seranam-piaramanidina eropeana izay manana fivezivezena mpandeha 5 ka hatramin'ny 10 tapitrisa isan-taona, izay nitombo indrindra ny fivezivezin'ny mpandeha hatramin'ny volana martsa.
Raha ny filazan'ny ACI Europe (fampitam-baovao napetraka), tamin'ny tapany voalohan'ny taona dia nahavita nitana ny laharana fahatelo tamin'ny tabilaon'ny fitomboan'ny fifamoivoizana ny seranam-piaramanidina nanomboka ny volana martsa lasa teo, teo amin'ireo seranam-piaramanidina iraisampirenena rehetra any Eropa, sokajy 5 ka hatramin'ny Mpandeha 10 tapitrisa isan-taona. Laharana fahatelo ny seranam-piaramanidina Larnaka, miaraka amin'ny fitomboan'ny 22.7 isan-jato na 571,926 mpandeha fanampiny, nialohavan'ny Keflavik International Airport (Islandy), miaraka amin'ny 39.7 isan-jato ary ny Seranam-piaramanidina Iraisampirenena Kiev (Okraina) izay mitana ny laharana faharoa miaraka amin'ny fiakaran'ny isan'ny mpandeha 29.4 isan-jato.
Ao amin'ny vondrona seranam-piaramanidina misy mpandeha 5 ka hatramin'ny 10 tapitrisa isan-taona, dia mbola i Larnaka no voalohany teo amin'ny seranam-piaramanidina iraisampirenena rehetra an'ny mpikambana ao amin'ny Vondrona eropeana izay nahatratra ny fitomboan'ny fifamoivoizana lehibe indrindra.
Maria Kouroupi, Senior Marketing and Communication Manager an'ny Hermes Airport dia nilaza fa "ny fikojakojana ny seranam-piaramanidina Larnaka amin'ny laharan'ny ACI eo akaikin'ny seranam-piaramanidina ambony eropeana dia manamafy ny fizotranay mahomby sy ny fitomboan'ny fifamoivoizana hatrany."
"Ny asa mafy, ny drafitra ary ny fikirizanay dia toa misy valiny, hatramin'ny faran'ny taona dia manantena izahay fa hihoatra ny fito tapitrisa sy sasany ny mpandeha ao Larnaka fotsiny," hoy i Kouroupi nanampy.
Ny divay avy any Sonoma dia mitsidika ny tanànan'i New York
Toronto dia mandray «audition mivantana» mandritra ny efatra andro amin'ny fivoriana sy fivoriambe ho avy